Tranga nampisahotaka teny Ankazomanga: nitsirara tamin’ny tany ilay lehilahy sempotra tsy nahatsiaro tena | NewsMada
Taorian’ny fizahana maimaika nataon’ireo mpitsabo avy eny amin’ny Foibem-pibaikoana ny ady amin’ny valanaretina coronavirus (CCO), nentina avy hatrany eny amin’ny Hopitaly manara-penitra, CHU Andohatapenaka ilay lehilahy nitsirara tamin’ny tany, sempotra tsy nahatsiaro tena. Tranga nampisahotaka teny Ankazomanga, omaly maraina.
Hatairana ny an’ny mponina eny Ankazomanga, omaly maraina, tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany. Raim-pianakaviana 62 taona, efa tsy nahatsiaro tena no hitan’ny mponina nitsirara teo anoloan’ny farmasia iray teny an-toerana. “Hita ho sempotsempotra izy, avy eo tsy nahatsiaro tena ary io nitsirara tamin’tany io”, hoy ny fitantaran’ireo nahita voalohany. Nisahotaka ny mponina, ny mpivarotra, indrindra ireo teo amin’ny manodidina nahita izany. Efa mitaintaina be ihany mantsy ny rehetra, manoloana ity fiparitahan’ny valanaretina coronavirus ity. Toerana be olona rahateo eny Ankazomanga. Nibahana tao an-tsain’ny olona, araka ireny efa voalaza ombieny ombieny ireny, fa anisan’ireo fambara mety miseho amin’ity valanaretina Covid-19 ity ny fahasemporana, ankoatra ny fiakaran’ny hafanana…
Nisy tamin’ireo nahita no nandray fanapahan-kevitra haingana, nilaza fa tsy tokony ho kitihina, na hatonina akaiky, fa hiantsoana tompon’andraikitra ity olona tratran’ny tampoka ity. “Tsy fantatra mazava mantsy izay tena mahazo azy, ka aleo mailo sy mitandrina”, hoy ny sasany.
Noraisina ny fepetra rehetra…
Adiny roa taorian’izay, tonga tokoa ny ekipa nahitana mpitsabo, avy eny amin’ny CCO Ivato. Nanao ny fizahana ny marary ny ekipan’ny ny BIS na ny “Brigade d’Intervention Spéciale” araky ny fandaminana sy ny toromarika avy amin’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny « Centre de Commandement Opérationnel CCO COVID 19 ».
Taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo avy amin’ny BIS, notarihin’ny Médecin Capitaine MASINA Ndalana d’Assise, dia tsy fahasemporana vokatry ny tsimokaretina coronavirus no nanjo ity rangahy ity fa noho izy efa taizan’aretin’ny tosidra sy vokatry ny aretim-po. Vonjy aina no natao ka tsy maintsy mijery ny fomba rehetra hamonjena izany ny miaramila eo anivon’ny BIS ary nitondra ilay narary teny amin’ny hopitaly Befelatanana.
Efa nanomboka nahatsiaro tena, ka afaka niteny izy nandritra izay, ary nisy fanontaniana napetraka taminy. Tamin’izany no nanambarany fa “efa sempotra aho tamin’iny ary saika hamonjy dokotera, ary saika hijery fanafody ihany koa ». Nolazainy tamin’ireo mpitsabo nizaha azy koa fa hoe “tsy mpahazo azy mihitsy ny tranga toa izao”. Nandritra izay anefa, nilaza ireo mpiara-miasa aminy tonga teny an-toerana, ary toa nandiso ny filazana nataony tamin’ireo mpitsabo. Nambaran’ireto farany fa hoe “efa mpahazo azy izao rehefa miakatra matetika ny tosidrany”.
Tsiahivina fa iray amin’ireo hopitaly fandraisana ireo olona marary na ahina ho mitondra ny valanaretina coronavirus ny eny Befelatanana ankoatra ny hopitaly Anosiala Ambohidratrimo sy ny etsy amin’ny CHU Andohatapenaka.